Kungani Amavidiyo Wakho Ebhizinisi Ephuthelwa Uphawu, Nokuthi Yini Ongayenza Ngayo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 26, 2021 NgoLwesihlanu, Mashi 26, 2021 UThemba Morley
Sonke siyazi ukuthi othile usho ukuthini uma ethi "ividiyo yenkampani." Ngokombono, leli gama lisebenza kunoma iyiphi ividiyo eyenziwe yinkampani. Bekukade kuyichaza okungathathi hlangothi, kepha akusekho. Kulezi zinsuku, iningi lethu ekumaketheni kwe-B2B lisho ividiyo yenkampani ngesinono esincane.
Lokho kungenxa yokuthi ividiyo yezinkampani iyabheda. Ividiyo yenkampani yakhiwa imidwebo yamasheya yabantu osebenza nabo abahehe ngokweqile ukusebenzisana egumbini lezingqungquthela. Ividiyo yenkampani ifaka i-CEO ejulukile ifunda amachashazi e-teleprompter. Ividiyo ebumbene ingukuhlelwa kabusha komcimbi okuqala ngokuthi abantu bathole ibheji yamagama abo etafuleni bese kuphetha ngokushaya izandla izilaleli.
Ngamafuphi, ividiyo yezinkampani iyisicefe, ayisebenzi, futhi ichitha isabelomali sakho sokumaketha.
Izinkampani azilahlanga ukuqhubeka nokwenza Inkampani amavidiyo. Njengomakethi, ungakhetha ukwenza amavidiyo ahehayo, asebenzayo, futhi alethe imiphumela yangempela.
Kunezinyathelo ezintathu ezibalulekile okufanele uzilandele ukuqala uhambo lwakho kude ividiyo yenkampani futhi ungene ukumaketha okusebenzayo kwevidiyo:
Tshala imali kwezobuciko.
Thembela izethameli zakho.
Isinyathelo 1: Qala Ngecebo
Iningi Inkampani ukuhlela ividiyo kuqala ngamagama amane alula: Sidinga ividiyo. Iphrojekthi iqala ngokuthi iqembu selivele linqume ukuthi ividiyo iyadingeka nokuthi isinyathelo esilandelayo ukwenza into.
Ngeshwa, ukugxumela ngqo ekukhiqizeni ividiyo kweqa izinyathelo ezibaluleke kakhulu. Amavidiyo ezinkampani azalwa ngokushoda kwamasu wevidiyo acacile, azinikele. Ithimba lakho lokumaketha ngeke ligxume kunkundla entsha yezenhlalo noma ukuxhaswa komcimbi ngaphandle kwamasu nezinhloso ezicacile, ngakho-ke kungani ividiyo ihlukile?
Isibonelo: Umault - Ubhajwe kuvidiyo Yenkampani
Ngaphambi kokuntywila ekwakhiweni kwamavidiyo, zinike isikhathi sokusebenza ngecebo levidiyo. Okungenani, qiniseka ukuthi ungaphendula le mibuzo elandelayo:
Iyini inhloso yale vidiyo? Ilingana kuphi nohambo lwakho lwamakhasimende? Elinye lamaphutha amakhulu eliholela Inkampani ividiyo ayicacisi ukuthi le vidiyo ifinyelela kuphi kufaneli yokuthengisa. Ividiyo isebenza izindima ezahlukahlukene ngezigaba ezahlukahlukene zohambo lwamakhasimende. Ividiyo esiteji sokuqala idinga ukukhuthaza izethameli ukuthi ziqhubeke nokuzibandakanya nomkhiqizo wakho. Ividiyo yesigaba sekwephuzile idinga ukuqinisekisa ikhasimende ukuthi lenza isinqumo esifanele. Ukuzama ukuhlanganisa lezi ezimbili kuholele ku ukungqubuzana okungalingani.
Obani ababhekiwe kule vidiyo? Uma une amaningi umuntu wokuthenga, zama ukukhetha eyodwa ozoyifinyelela ngevidiyo eyodwa. Ukuzama ukukhuluma nawo wonke umuntu kukushiya ungakhulumi namuntu. Ungahlala wenza izinhlobo ezimbalwa zevidiyo ukukhuluma nezithameli ezihluke kancane.
Izosetshenziswa kuphi le vidiyo? Ngabe libambelela ekhasini lokufika, lithunyelwa ngama-imeyili abandayo, livula imihlangano yokuthengisa? Ividiyo ingukutshalwa kwezimali okukhulu, futhi kuyaqondakala ukuthi ababambiqhaza bafuna ukwazi ukuyisebenzisa ezimeni eziningi ngangokunokwenzeka. Noma kunjalo, ividiyo idinga ukusho futhi yenze izinto ezihluke kakhulu ngokuya nge- umongo izosetshenziselwa. Ividiyo ezinkundleni zokuxhumana idinga ukuba mfushane, iqonde, futhi ifike ngqo ephuzwini lokubandakanya ababukeli ukumisa umqulu. Ividiyo yekhasi lokufika izungezwe yikhophi enikeza yonke imininingwane umuntu angayifuna.
Cabanga ukwenza izinhlobo eziningi zevidiyo ukuze zisetshenziselwe izinto ezahlukahlukene. Umshayeli wezindleko omkhulu kunabo bonke ekudaleni ividiyo izinsuku zokukhiqiza. Isikhathi esingeziwe esichithwe ukuhlela inguqulo ehlukile noma ukusika okuqondisiwe kuyindlela engabizi kakhulu yokuthola i-mileage eyengeziwe endaweni yakho.
Ukuthatha isikhathi sokucacisa isu lakho, kungaba nethimba lakho noma ne-ejensi yakho, kucacisa lokho ividiyo okudingeka ikusho futhi ikwenze. Lokho nje kukodwa kuthatha igxathu elikhulu kunawo wonke ukusuka endaweni "yezinkampani", ngoba uzoqinisekisa ukuthi ividiyo inomyalezo ocacile, izethameli eziqondiwe, nenhloso.
Isinyathelo 2: Invest in Creative
Iningi Inkampani amavidiyo avuselela amathopi afanayo akhathele kaninginingi. Mangaki amavidiyo owabonile aqala lapho ilanga liphuma phezu komhlaba, bese usondeza empambanweni yomgwaqo ematasa enezindawo zabahamba ngezinyawo, okusayina Ukuxhumana? Yebo. Lawa mavidiyo kulula ukwenziwa futhi kulula ukuthengisa uchungechunge lokuthatha izinqumo, ngoba ungakhomba ezibonelweni zazo eziyisigidi. Bonke abancintisana nabo bazenzile.
Futhi yingakho nje zingasebenzi. Uma bonke izimbangi zakho zinevidiyo ngesitayela esifanayo, ungalindela kanjani ithemba lokukhumbula ukuthi iyiphi eyakho? Lawa mavidiyo akhohliwe ngokushesha ngemuva kokubukwa. Amathemba enza ukukhuthala kwawo futhi ayakucwaninga wena nabo bonke izimbangi zakho. Lokho kusho ukuthi ukubukela ividiyo yakho ngemuva nje komncintiswano wakho. Udinga ukudala ividiyo eyenza amathemba akukhumbule.
Uma uwenzile umsebenzi wakho wesikole futhi wenza isu levidiyo eliphelele, ungahle ube nomqondo wendlela yokubandakanya umyalezo wakho. Into enhle ngecebo levidiyo ukuthi lokho iqeda izinketho zokudala ezingxabanweni. Isibonelo, uma wazi ukuthi ufuna ukwenza ividiyo esiteji sesinqumo sama-CIO ezinkampanini ezisezingeni lebhizinisi, ungahle uhlele ukwenza ividiyo efakazelayo ukuze ubaqinisekise ukuthi basebenzisana kahle. Ungasusa noma iziphi izinhlelo zokwenza ividiyo idabule phakathi komkhiqizo noma indawo yomkhiqizo ekhuthazayo. Lawo mavidiyo azosebenza kahle kakhulu ohambweni lwamakhasimende.
Isibonelo: Deloitte - The Command Center
Umqondo wokuqamba akudingeki ube ubuhlakani bezinga likaChristopher Nolan. Ofuna ukukwenza ukuthola indlela yokukhuluma ngqo kuzethameli zakho ngendlela ehehayo futhi ekhumbulekayo.
Ukutshala imali ekwakheni kungaphezu nje komqondo wevidiyo. Ividiyo eqinile yokumaketha ye-B2B idinga iskripthi esihehayo nombono ocacile obekwe ngamabhodi wezindaba ngaphambi kokuqala kokukhiqizwa. Ividiyo "yezinkampani" imvamisa a) ayibhalwanga noma b) uhlu lwamaphoyinti okukhuluma akopishwe futhi anamathiselwa kwifomethi yesikripthi.
Amavidiyo angabhalwanga angaba namandla, kuya ngendaba ofuna ukuyisho. Isebenza kahle ngobufakazi noma indaba engokomzwelo. Okungabhalwanga akulungile kangako ekwethulweni komkhiqizo noma endaweni yomkhiqizo. Lapho umbono wevidiyo uku uxoxe noMphathi Omkhulu, khona-ke ukhiphela ubuciko ku-CEO naku-video editor okudingeka uyihlanganise ibe yinto ehambisanayo. Lokho kuvame ukuholela ezikhathini ezinde ngemuva kokukhiqizwa kanye namaphoyinti angabanjwanga.
Umbhali wamakhophi onekhono angenza izimangaliso ngokuhumusha amaphuzu akho okukhuluma abe yifomethi yevidiyo. Ukubhalwa kweskripthi sevidiyo kuyikhono elikhethekile okungebona bonke ababhali bamakhophi abanalo. Ababhali abaningi bamakhophi, ngencazelo, bahle kakhulu ekuvezeni okuqukethwe ngokubhala. Azizinhle impela ekuvezeni okuqukethwe ngomsindo / okubonwayo. Noma ngabe unababhali abasebenza ngaphakathi eqenjini lakho lokumaketha, cabanga ngokubandakanya umbhali weskripthi onguchwepheshe wamavidiyo akho.
Isinyathelo 3: Thembela Izilaleli Zakho.
Ngilahlekelwe ukubalwa kwezikhathi lapho sizwe inguqulo ye:
Sithengisa kuma-CIO. Sidinga ukuba ngokoqobo noma ngeke bakuthole.
Uxolo? Uthi ama-CIO ezinkampani ezinkulu adinga konke okupelwe wona? Okulandelayo, uzosho ukuthi abantu abathandi amaphazili noma amanoveli ayimfihlakalo.
Ukuthemba izilaleli zakho kusho ukukholwa ukuthi bahlakaniphile. Ukuthi balungile emisebenzini yabo. Ukuthi bafuna ukubuka okuqukethwe okubajabulisayo. Izethameli ziyazi ukuthi kungokuhweba. Kepha uma kufanele ubuke izikhangiso, awuthandi yini indawo ehlekisayo ye-GEICO kwisikhangiso esomile sendawo yokuthengisa izimoto?
Uma izithameli zakho zimatasa (futhi okungezona ezakho), zinikeze isizathu sokuchitha isikhathi ubuka ividiyo yakho. Uma imane ivuselele amaphoyinti ezinhlamvu kusuka kushidi lakho lokuthengisa, lapho-ke angakwazi ukuskena lokho esikhundleni salokho. Ividiyo eqinile inika ababukeli isizathu sokuchitha imizuzwana engu-90 yosuku lwabo kuyo.
Ividiyo eqinile yileyo ebamba izithameli zakho, ibenze bacabange, futhi ibalethele inani elengeziwe. Inikeza okuthile okungenakutholwa ekhasini lokuthengisa noma ku-infographic. Amavidiyo akho e-B2B akufanele akwazi ukushintshwa nge-PowerPoint.
Isibonelo: INuance - Thina, Amakhasimende
Ividiyo yenkampani ikhule ivela endaweni enhle. Njengoba ividiyo isifinyeleleka kalula njengomphakathi, izinkampani bezifuna ukweqa lo mkhuba. Manje leyo vidiyo iyisidingo sokumaketha kwanamuhla, qiniseka ukuthi udala amavidiyo akhulisa ukuthengisa futhi aletha i-ROI ebalulekile. Corporate ividiyo ngeke ikufikise lapho. Ividiyo enesu elicacile, ubuhlakani bokudala, futhi ethembela ababukeli bayo.
Landa umhlahlandlela wethu ogcwele ukuthola amathiphu amaningi wokweqa isicupho sevidiyo yenkampani:
Izindlela Ezi-7 Zokugwema Ukwenza Ividiyo Ehlanganisiwe
Tags: ividiyo yebhizinisiividiyo yenkampaniukumaketha kwamavidiyo ezinkampanideloitteumthunziumaultukukhangisa kwevidiyoamasu wokumaketha amavidiyoisu lokukhangisa ngevidiyoisu levidiyoamavidiyo webhizinisi
UThemba Morley uyi-COO ka Umault, i-B2B ejwayelekile yokuthengisa ividiyo eseChicago. Uhlanganyela i-podcast Ukufa Kwevidiyo Ehlanganisiwe, umbukiso onamathuluzi nezeluleko zokwenza amavidiyo we-B2B abantu abafuna ukuwabuka empeleni.